Memory & Brain Power မှတ်ဥာဏ် တိုးတက်အားဖြည့်ဆေး
(မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး New Zealand နိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ပါသည်။)
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နေ့စဉ်သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
-- မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်များ မြင့်မားလာစေခြင်း၊
-- အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု စွမ်းရည်တိုးတက်လာစေခြင်း၊
-- စိတ်အာရုံစုစည်းနိုင်စွမ်း ပိုမိုကောင်းလာစေခြင်း နှင့်
-- သင်ယူနိုင်မှု စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် များစွာထောက်ကူပေးပါသည်။
-- ဦးနှောက်သွေးလည်ပတ်မှုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့်
-- ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ စိတ်ကြည်လင်တည်ငြိမ်မှုရရှိအောင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး ၊
-- စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေရန် အတွက် များစွာ ကူညီပေးသော ဆေးစွမ်းကောင်း တစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။
-- ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် သင်ယူနိုင်မှု စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် များစွာအထောက်ကူပေးရုံ သာမက
-- လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သူများ အတွက်လဲ များပြားသော လုပ်ငန်းတာဝန် အစီအစဉ်များကို ကောင်းမွန် တိကျစွာ စီမံဆောင်ရွက် နိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကိုပါ လျော့ချပေးနိုင်သော အားဆေးဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကြုံတွေ့ရတတ်သော ပြသနာများ၊ အခက်အခဲများကို ကောင်းမွန် မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
-- အသက်အရွယ်ကြီးသော လူကြီးများသောက်သုံးပါက အသက်ကြီးသည်နှင့် အမျှ အဖြစ်များလာသော မေ့လွယ်ခြင်း စကား ထက်ခါထက်ခါ မေ့လျော့စွာ ပြန်လည်ပြောမိခြင်း နှင့် မှတ်ဥာဏ်များ ချို့ယွင်းလာမှုများကို များစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အရွယ် ၃ပါး မရွေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်အားဆေးဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင်ခြေချောင်း လက်ချောင်းတွေ ညောင်းညာ ထုံကျဉ်နေခြင်း မရှိအောင် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းရှိ သွေး လှည့်ပတ်မှု ကောင်းမွန်လာစေရန် အဓိက ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး ၊ နှလုံးအားကောင်းပြီး ကျန်းမာစေရန်လဲ များစွာကူညီပေးနိုင်သောအားဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဗူးလျှင် ၇၈၉၀၀ ကျပ် (အလုံး ၃၀ ပါဝင်ပါသည်)
အသက် ၁၂ နှင့် အထက် - တနေ့ ၁ မှ ၂လုံးအထိ အစာစားပြီတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Ginkgo biloba is one of the world’s most ancient trees, and traditional Chinese medicine has used it asahealing herb for thousands of years. It hasalong history of use in supporting mental performance (learning, concentration, memory), and helping to improve peripheral blood flow. Plus, it can be helpful to increase your energy levels if you’re prone to fatigue. Each Healtheries Memory & Brain Power Ginkgo 4000 provides 4000mg of pure, standardised Ginkgo biloba extract. It’s the quick, easy, convenient way to support your mind and your energy levels.
Helping to maintain peak mental performance – supporting your memory, focus, concentration and learning. Helping to improve blood flow to the brain to support healthy mood balance and reduce low mood and depression. Helping to improve circulation and blood flow, especially to your fingers, toes and legs. Supporting central circulation and helping to maintain your heart health Assisting with tinnitus (ringing in your ears) if it’s happening because of poor circulation